Dr. Tint Swe's Writings: Blood Type and Crossmatch သွေးအုပ်စုနှင့် တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်း
Blood Type and Crossmatch သွေးအုပ်စုနှင့် တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်း
ဆရာရှင့် ကျွန်မဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေး တိုင်ပင်ခွင့်ပြုပါဆရာ။ ဆေးခန်းကို သွေးစစ်တဲ့လူလာပါတယ်ဆရာ။ သွေးစစ်ကြည့်တော့ O + ပါဆရာ။ O သွေးပြောတော့ သူကအရင်ကသူက AB တဲ့ဆရာ။ မဟုတ်ဘူး O သွေး ပြောလိုက်ပါတယ်။ O သွေး ဖြစ်ကြောင်းရေးပြီး သူတို့ကိုပေးရပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ ဆေးခန်းမှာ သွေးလာစစ်တဲ့သူကိုစာရင်ပြန်သွင်းရပါတယ်ဆရာ အဲ့မှပြန်သွင်းတော့သွေးအမျိးအစားကို AB လို့သွင်းမိတယ်ဆရာ ပြန်ကြည့်မိမှသိတာပါဆရာ မေ့သွာလို့ဘဲလား မသိပါဘူးဆရာ။ သွေးစစ်တဲ့လူကိုလည် O သွေးကို AB လို့ ရေးမိလား ဝေခွဲမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ သွေးလာစစ်တဲ့သူကိုလည်း O သွေးကို AB မှားရေးမိလာမသိတော့ပါဘူးဆရာရှင့် သွေးလာစစ်တဲ့သူကိုလည်း O သွေးကို AB နဲ့များရေးပေးမိလားဝေခွဲမရတော့ပါဘူးဆရာရှင်။ အကယ်လို့ သူက AB ထင်ပြီးတခြားလူ AB ကိုသွေးလှူရင်ပြသာနာရှိနိင်လာဆရာရှင့်။ အကယ်လို့ သူသွေးသွင်ရတာရှိရင်သူက AB မှတ်ပြီး သူများ AB လှူရင်ကောပြဿနာ ရှိနိင်လားဆရာရှင့် အကယ်၍ သူကသွေးသွင်းရမယ်ဆို AB ထင်ပြီးပြောလိုက်ရင် သွေးလှူတဲ့လူက AB သွေးကိုလှူရင်ကောပြဿနာရှိနိင်လာဆရာရှင့် အဲ့လိုတွေတွေးပြီး ပြဿနာဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေပါတယ်ဆရာရှင့်
Rh blood group system အာရ်အိတ်ခ်ျ သွေးအုပ်စုခွဲနည်းစနစ် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/rh-blood-group-system.html
Blood groups သွေးအုပ်စုများ အနည်း-အများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/blood-groups.html
Blood donation rules သွေးလှူခြင်းဥပဒေသများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/blood-donation-rules.html
ဆရာရှင် O+ ကို AB+ ကသွေးလှူမယ်ဆိုရနိင်လာဆရာရှင့်။
သွေးမသွင်းမီတိုင်းမှာ လှူထားတဲ့သွေးနဲ့ လူနာသွေးတွေကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးတာကိုခေါ်တယ်။ သွေးအုပ်စုခွဲတာကို အရင်လုပ်တယ်။ တချို့ဆေးရုံတွေမှာ Recipient antibody screen ခေါ် လူနာ အင်တီဘော်ဒီ စစ်ဆေးနည်းပါလုပ်တယ်။
သွေးအုပ်စုခွဲတာက ၂-၃ မိနစ်ကြာမယ်။ Crossmatching လုပ်တာ ၄၅ မိနစ်ကနေ တနာရီအထိကြာနိုင်တယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာ အဲတာမလုပ်နိုင်ပါ။ သွေးအုပ်စုတူတာဖြစ်ဖြစ် အိုသွေးဖြစ်ဖြစ် သွင်းပေးရတယ်။ O and Rh negative အိုအနှုတ်ကို Universal donor ခေါ်တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာတော့ ယောက်ျားအတွက် O+ နဲ့ မိန်းမအတွက် O- သွေးသုံးတယ်။
သွေးလှူဘဏ်ကပ်ထဲမှာ ဘာရေးထားထား တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးလို့ တူတာကိုသာ သွေးသွင်းပေးမှာသာဖြစ်တယ်။ သွေးသွင်းကာစအချိန်မှာလည်း ဘာဖြစ်လာသလဲ စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။
Cleaning အမှိုက် နှင့် အိမ်ဦးခန်းပိုစတာ
Hi ကူးစက်ရောဂါအောက်မှာ ဥပေက္ခာရှေ့ထားမှ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆရာ တဲ့။ ဥပေက္ခာစကားလုံးက အဓိပ္ပါယ်လေးနက်တယ်။ လွယ်လွယ်လေးသာ ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်က ကိ...
► 2020 (1614)
▼ 2019 (2912)
B ဘီရောဂါ အသည်းရောင်တာမဟုတ်
Inverted nipples ထိပ်ဖျား ချိုင့်ဝင်နေခြင်း
HCG ကိုယ်ဝန်ရှိ မရှိစစ်တဲ့ ဟော်မုန်း
Ovarian dermoid cyst ဒါးမွိုက်ဆစ်
သေရခြင်း အပြား လေးပါးရှိ၏
တန်ဖိုး နှင့် တန်ဘိုး
Baschi Pink Quick Slimming ပိန်ဆေးကြော်ငြာ
Life expectancy သူအရင်လား ကိုယ်အရင်လား
Font and Phone ဖတ်မရဆိုသူများခင်ဗျား
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ က မြန်မာနိုင်ငံ
Broken Heart Syndrome ရင်ကွဲနာ
ရေ နှင့် ရည်
HIV Prevention R&D
Simple Clear Easy ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး မရေးလိုပါက...
အကျော်ဒေယျ နှင့် အကျော်ဇေယျ
Blood Type and Crossmatch သွေးအုပ်စုနှင့် တိုက်ရို...
Selling Sickness ရောဂါကို ရောင်းချနေခြင်း
Two-headed Monster ခေါင်းတရှည်း ကိုယ်တရံ
Doctors Sometimes Pretend ကန်တော့ပါ မေးခွန်းတမျိုး...
Media Ethic - Medical Ethic မီဒီယာအက်သစ် ဆေးပညာအက်...
ကျို နှင့် ကြို
ရှင်သာမဏေ သွတ်သွင်းပွဲတွေမို့ တပြည်လုံးနွှဲပျော်လို...
Baby ကလေးဝမ်းပျက်တာ အားဆေးနဲ့ မဆိုင်
Neem and BP တမာရွက်နဲ့ သွေးတိုး သို့မဟုတ် တမာရွက်က...
Pills Question ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေမှာ အရောင်တူရင် ဆေ...
အမ အစ်မ အကို အစ်ကို
Chemotherapy and Pregnancy ကိုယ်ဝန်နှင့် ကင်ဆာဆေး
Policy Made Mistake ဘာလို့ မှားနေကြလဲ
ထလော့မြန်မာ နှင့် ကဗျာပြိတ္တာ
စိန် နှင့် စိမ်
Brown Rice ဆန်လုံးညို
ကုတ် နှင့် ကုပ်
Chief Editor အယ်ဒီတာချုပ်များသို့
လှိုင်းကလေး - သင်
Around The World In 25 years ကမ္ဘာပတ်လည် ခရီးသည်
One Kidney Person ကျောက်ကပ်တခုတည်းရှိသူ
မြန်မာနိုင်ငံတဝှန်းလုံး တောတွင်းတိရစ္ဆာန်များ ခန့်မ...
လက်ရေတပြင်တည်း ရှေးကထက် ပိုချစ်ကြတယ်
Losartan potassium tablets သွေးကျဆေးသတင်း
Hepatitis B tests ဘီပိုး စမ်းသပ်နည်းများ
Mango Tree သုံးဖူးပေထွက် ကင်းသရက်ဖြင့်
Famous Border Walls ကမ္ဘာမှာထင်ရှားတဲ့ တံတိုင်းကြီး...
Lactose free milk လက်တို့စ်ဖရီး နို့မှုန့်
Mount Rushmore သမတများနေ့
Supraventricular Tachycardia နှလုံးခုန်မြန်ရောဂါ
JE vaccine question ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ...
Modes of Disease Transmission ရောဂါတွေ ဘယ်လိုကူးစက...
► 2017 (3368)